ICT.com.mm မှာ ANVIZ ရဲ့ Attendance Machine မျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
Home » Review » Attendance Machine »
Attendance Machine, News, Review
ICT.com.mm မှာ ANVIZ ရဲ့ Attendance Machine မျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်
ICT.com.mm မှာ ANVIZ ရဲ့ Attendance Machine မျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်…
ကျောင်းခန်ထဲက ကျောင်းသားအရေအတွက်ကို record လုပ်မလား? ရုံးခန်းထဲက ဝန်းထမ်းအရေအတွက်ကို record လုပ်မလား? သေချာမှတ်နိုင်ပြီး record လုပ်ပေးမယ့် ANVIZ ရဲ့ Attendance Machine မျိုးစုံပါနော်။
ANVIZ ဟာဆိုရင် လုံခြုံရေးအတွက်လဲ စိတ်ချရတဲ့အပြင်၊ Fingerprint နဲ့ Attendance Machine သာမက Face Time Attendance and Access Control လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာကို scan လုပ်ပေးမယ့် Attendance Machine မျိုးစုံကိုပါ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ ဝယ်ယူလို့ရပြီနော်…
Shop here: https://www.ict.com.mm/brand/anviz/
ခုလာမယ့် ဒုတိယအပတ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၇)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့အတွက် ဒုတိယမြောက် ဖောက်ပေးမယ့် ကံစမ်းမဲကတော့ K1,161,600 တန် AOC Monitor U32U1 အမဲရောင် Monitor တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
Newer Xiaomi Redmi 10X Pro 5G (8GB/128GB) ဖုန်းတွေ ICT.com.mm မှာ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်
Older ICT.com.mm မှာ Dell XPS 13 (2 in 1) Laptop (i7/i5-11th Gen) ကို ဝယ်ရပြီ